Neigene » Unicity – Myanmar
လှပသော အသားအရေသည် ကျန်းမာသော ဆဲလ်များနှင့်စတင်သည်။ Neigene သည် ဆဲလ်များအတွက် အထူးရည်ရွယ်၍ အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် အဆင့်မြင့်နည်းပညာနှင့် ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။
သင့် DNA သည် သင့်ကို သူမတူစေသော အရာဖြစ်သည်။ DNA တွင် သင့်ကိုယ်ထဲရှိ protein တစ်ခုချင်းစီနှင့်ပတ်သက်၍ ဇီဝဗေဒနှင့်ဆိုင်သော သင်္ကေတစနစ်ပါရှိသည်။ DNA သည် သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကို protein များစွာထုတ်ရန် လှုံ့ဆော်ပေးပြီး “messenger” molecule ကို တည်ဆောက်သောမှတ်တမ်းနှင့် လက္ခဏာ ဟူ၍ သိရသော ဖြစ်စဉ်နှင့် ကြုံတွေ့နေရသည်။ protein တစ်ခုချင်းစီသည် သင့်ကိုယ်ထဲတွင် သင်ကျန်းမာရန် အရေးပါသော အရာများကို ယူဆောင်လာပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ အသက်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှ DNA မှတ်တမ်းကို ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်နိုင်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ protein များသည် အလုပ်မလုပ်တော့ပေ။ Neigene သည် ကောင်းမွန်သော Genomeceutical နည်းစနစ်ကို အခြေခံအဆင့်မှစ၍ အသားအရေကို ကျန်းမာစေရန် ထိန်းသိမ်းပေးသော ဗီဇလက္ခဏာကို ထောက်ပံ့ရာတွင် အသုံးပြုသည်။
အသားအရေနှင့်ဆိုင်သော ထုတ်ကုန်အများစုသည်အပေါ်ယံမျာက်နှာပြင်၌သာ တည်ရှိပြီ ချွေး ရေနှင် သဘာဝအတိုင်းထွက်လာသည့်အဆီများဖြင့် လွယ်ကူစွာ ပျက်သွားနိုင်သည်။ Neigene နည်းစနစ်ကို အနုကြည့်မှန်ဖြင့်သာမြင်နိုင်သော ပစ္စည်းများနှင့် အသားအရည်ထဲ စိမ့်ဝင်ပြီး ကြာရှည်ခံရန် သိပံ္ပနည်းကျ ထုတ်လုပ်ထားသည်။
အလှအပသည် အရေပြားတစ်ထောက်စာထက် ပိုမိုပါသည်။ ထို့ကြောင့် Collagen Plus ကို အတွင်းရော အပြင်ရောအတွက် လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ Collagen Plus သည် အသားအရေ ချောမွေ့မှုနှင့် အရေးကြောင်းလျော့ကျစေရန် နေ့စဉ် တစ်နေ့တစ်ကြိမ် လိမ်းရန် လိုအပ်သော ပစ္စည်း ဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ ပို၍ကျန်းမာရန်နှင့် ပိုမို၍ အတွင်းကျကျ လှပသော အသားအရေပိုင်ဆိုင်နိုင်ရန် ရိုးရှင်းသော နည်းလမ်းတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအသုံးပြုသော ပါဝင်ပစ္စည်းများ၏ ဖော်မြူလာ
ဆွစ်ဇာလန် ရှိ တောင်တန်းများမှ အထူးထုတ်လုပ်ထားသော Snow Algae သည် အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။ Collagen ကို ထိန်းသိမ်းပြီး calorie ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ဆင်တူခြင်းဖြင့် အသားအရေကို သဘာဝအတိုင်း အားဖြည့်ပေးပြီး ပြန်လည်နုပျိုစေ၍ မှဲ့ခြောက် တင်းတိပ်များကို သိသိသာသာ လျော့နည်းစေသည်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ပျက်စီးမှုများကို ကာကွယ်ရန် Snow Algae သည် သဘာဝပစ္စည်းများကိုသာ အသုံးပြုထားပါသည်။
Retinyl Palmitate သည် အကောင်းဆုံးသော traditional retinoids ထက် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်မှုကို လျော့နည်းစေကြောင်း ပြသခဲ့သည့် Vitamin A မှ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ Retinyl Palmitate သည် ကျန်းမာသောဆဲလ်များကို အသစ်ပြန်လည်မွေးဖွားရန် အားပေးသော skin-cell ကို လည်ပတ်စေသည့် anti-oxidant တစ်မျိုးလည်း ဖြစ်သည်။
ဆေးဝါးဗေဒတွင် ထိပ်တန်းအဖြစ် Japonicus ကို ကာလကြာရှည်စွာ သတ်မှတ်ထားကြသည်။ ၄င်း၏အသုံးပြုပုံကို ရှေးဟောင်းတရုတ်ဆေးဝါးများတွင် တွေ့နိုင်သည်။ Japonicus သည် သဘာဝအတိုင်း အသားအရေကာကွယ်မှုတွင် အားဖြည့်ပေးပြီး ရေဓာတ်ကို ကြာရှည်စွာ ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်ရန် လုပ်ဆောင်ပေးသည်။
Marigold ကို အစဉ်အလာအားဖြင့် ယေဘုယျဆေးဖက်ဝင် ရည်ရွယ်ချက်အတွက်သာ အသုံးပြုခဲ့သည်။ Marigold ၏ သဘာဝအတိုင်း ပျောက်ကင်းနိုင်သော အစွမ်းသတ္တိများသည် အသားနီမြန်းခြင်းကို လျော့ကျစေပြီး အသားအရေကို အားဖြည့်ပေးသည်ဟု ပြသခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။
Neigene သည် ရေတိုလျှင်မြန်စွာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးသော စနစ်မဟုတ်ပေ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ သိပ္ပံနည်းကျ ရလဒ်များသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ Genomeceutical နည်းစနစ်မှာ အကျိုးသက်ရောက်ကြောင်း သက်သေပြနေသည်။
ဤစနစ်သည် ဆေးပညာရှုထောင့်အရ သင့်အသားအရေသည် မည်သည့် အမျိုးအစားဖြစ်နေပါစေ အသုံးပြုနိုင်ကြောင်း သက်သေပြပြီးဖြစ်သည်။
ထိန်းညှိပေးသည့် Gel စနစ်
အဆင့် ၁၊ | အဆီပြန်သော အသားအရေအတွက်
ပုံမှန်အသားအရေမှ အဆီပြန်သောအသားအရေအတွက် ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီ ပုလဲပါဝင်သော cleanser သည် အညစ်အကြေးများကို နူးနူးညံ့ညံ့ဖြင့် ထိရာက်စွာ ဖယ်ရှားပေးပြီး သင့်အသားအရေကို သန့်သန့်ရှင်းရှင်းနှင့် ရေဓာတ်ကိုသဘာဝကျကျ ပြန်လည်ဖြည့်ဆည်းပေးသည်။
အဆင့် ၂၊ | အဆီပြန်သောအသားအရေအတွက်
ဤအနည်းငယ်သောရေဓာတ်အားသည် အသားအရေညီညာစေရန် ကူညီထောက်ပံ့ပေးသည်။
အဆင့်၃ | အဆီပြန်သောအသားအရေအတွက်
ဤအသားအရေကို တောက်ပစေရန် အကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်များဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသော serum ကို အိုမင်းရင့်ရော်မှုမှကာကွယ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ genomeceutical သုတေသနလုပ်ခြင်းဖြင့် ဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားသည်။
အဆင့် ၄ | အဆီပြန်သောအသားအရေအတွက်
ပုံမှန်အသားအရေမှ အဆီပြန်သောအသားအရေအတွက် ထုတ်လုပ်ထားသည်။ အလွန်ကောင်းမွန်သောဤ gel သည် လှပသော အသားအရေအတွက် ရေဓာတ်ကို လွယ်ကူစွာ ထုတ်ယူပေးခြင်းနှင့် ပြည်လည်ဖြည့်ဆည်းခြင်းများ ပြုလုပ်ပေးသည်။
အဆင့် ၅ | အဆီပြန်သောအသားအရေအတွက်
ပုံမှန်အသားအရေမှ အဆီပြန်သောအသာအရေအတွက် ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ ဤကောင်းမွန်သော hydro-gel formula သည်အသားအရေကို ပြန်လည်အားပြည့်ပြီး စိုပြေလှပစေရန်ကူညီသည်။
အလှကုန်ပစ္စည်းများကို မည်သို့ အသုံးပြုရမည်နည်း။
1. Luxe Ultra Creamy Cleanser or Purifying Gel Cleanser
2. Treatment Essence
3. Concentrated Illuminating Serum
4. Hydro Restorative Emulsion or Balancing Restorative Emulsion
5. Collagen Plus
4. Intensive Recovery Night Cream or Advanced Recovery Night Gel
လိမ်းပြီး အချိန်မည်မျှအကြာတွင် ရလဒ်များကို မြင်တွေ့ရမည်နည်း။
အများစုသည် လိမ်းပြီး တစ်ပတ် သို့မဟုတ် နှစ်ပတ်အကြာမှသာ ရလဒ်များကို တွေ့ရှိရသည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ကောင်းမွန်သော ရလဒ်များကို တွေ့ရှိရသည်။
Neigene သည် အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန် ထုတ်လုပ်ထားသည်။ အကောင်းဆုံးရလဒ်များ ရရန် မနက်တစ်ကြိမ် ညတစ်ကြိမ်ကို နည်းစနစ်ကျကျ အသုံးပြုပေးပါရန် တိုက်တွန်းချင်ပါသည်။ သို့ပေမဲ့ Neigene အလှကုန်များကို တစ်ခုချင်းစီ ဈေးကွက်တွင် ရောင်းချထားခြင်း မရှိပါ။
ထုတ်ကုန်တစ်ခုချင်းစီကို ဘယ်နှစ်ကြိမ်စီ အသုံးပြုရမည်နည်း။
“အကောင်းဆုံးသောရလဒ်များအတွက် နေ့စဉ် မနက်ရော နေ့လည်ပါ အသုံးပြုပေးပါရန် တိုက်တွန်းချင်ပါသည်။ မှတ်ချက် – Collagen Plus ကို နေ့စဉ် တစ်နေ့တစ်ကြိမ်သာ အသုံးပြုရန်။”